Olee otú iji weghachi a jailbroken iPhone
Ndị na-esonụ na-enyere iji weghachi a jailbroken iPhone. Ọ dị mkpa iburu n'obi na mweghachi ga-akwụsị nile dị na data gị iPhone. A na-agụnye foto, ozi kọntaktị, videos, kalenda ntinye, songs ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọmụma ịchekwa na gị iPhone. Ọ bụ ya mere amamihe na-a nkwado ndabere na mpaghara nke data site na iji iTunes nakwa nyefee ma ọ bụ mmekọrịta na ekwentị na kọmputa dị ka nke a nwere ike Ewepụtara mgbe ekwentị mweghachi.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na mweghachi usoro na-ewe oge ụfọdụ dabere na ole data a na-echekwara na iPhone. Bụrụ na nke mweghachi si iCloud, oge bụ dabere na internet njikọ ọsọ. Tupu eweghachiri ekwentị, hụ na ọhụrụ version nke iTunes arụnyere.
Nzọụkwụ 1: Jikọọ iPhone gị Mac / PC.
Nzọụkwụ 2: Mgbe iTunes window-egosi, pịa gị iPhone n'okpuru NGWAỌRỤ (a nwere ike hụrụ na n'elu aka nri akuku ọzọ na iTunes ụlọ ahịa).
Nzọụkwụ 3: Họrọ nchịkọta taabụ wee họrọ Weghachi ndabere ... nhọrọ.
Nzọụkwụ 4: iTunes ozugbo ogosiri arịọ ma ọ bụrụ na ị bụ n'aka na ị chọrọ weghachi. Pịa na Weghachi nhọrọ na-amalite mweghachi usoro.
Nzọụkwụ 5: Your iPhone ga Malitegharịa ekwentị mgbe ọ na-eweghachi ụlọ ọrụ ntọala.
Nzọụkwụ 6: The Apple logo-egosi mgbe gị iPhone malitegharia. Mgbe Jikọọ na rụọ ọrụ ihuenyo egosi, jikọọ gị iPhone na kọmputa ruo mgbe ebighị zuru ezu.
Kwụpụ 7: N'oge a, e nwere abụọ nhọrọ: ebe ị nwere ike ma weghachi si aga ndabere ma ọ bụ melite dị ka a ọhụrụ iPhone. Họrọ otu.
Kwụpụ 8: Ozugbo ọ mere, iTunes ga ịchọpụta gị iPhone na ị na-ọma na-aga!
Dị iche n'etiti mmelite na Iweghachi
Emelite ihe iPhone dị nnọọ installs ọhụrụ software ma ọ bụ melite ka IOS version na-adịghị eme ka ọ bụla mgbanwe data echekwara, gụnyere kọntaktị, songs, videos, foto, ndenye kalịnda ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ozi. Iweghachi na aka nke ọzọ deletes niile data na na-echekwara na gị iPhone na resets ya ndị ụlọ ọrụ ntọala. Tupu eweghachiri iPhone, ọ dị mkpa na-a azụ elu na iTunes.
Tọgharịa ihe iPhone mgbe passcode na-efu
Mgbe ị na-ida passcode ma na-ekpochi nke gị iPhone, ekele e nwere ụzọ na-enyere iweghachi gị iPhone site na iji ma nke abụọ ụzọ
Apple ID paswọọdụ nrụpụta
Tọgharịa passcode maka ákwà ngebichi mkpọchi
Otú iji tọgharịa Apple ID paswọọdụ
Nzọụkwụ 1. Gaa na Apple website akpọ iForgot
Nzọụkwụ 2. Na ọsọ ọsọ igbe, pịnye gị Apple ID na pịa Ọzọ. Ọ bụrụ na ị chefuru gị Apple ID, pịa na njikọ n'okpuru - chezọrọ gị Apple ID na soro ntuziaka na ihuenyo.
Nzọụkwụ 3. Identity nkwenye adịru Apple ga-eziga a nkwenye njikọ na email metụtara na ID na ị ga-jụrụ ịza nche ajụjụ. Ọ na-achọrọ na ị nyochaa njirimara gị ụbọchị ọmụmụ.
Nzọụkwụ 4. ịgbanwe paswọọdụ gị mgbe nkwenye. Kara gị mma ịhọrọ a ike paswọọdụ. A ike paswọọdụ bụ otu nke ndị mejupụtara mbuaha ikpe akwụkwọ ozi, nọmba na pụrụ iche odide.
Olee otú Tọgharia passcode maka ákwà ngebichi mkpọchi
Nzọụkwụ 1: Jikọọ iPhone eriri USB gị Mac / PC. Otú ọ dị, n'oge ahụ, adịghị jikọọ njedebe nke iPhone.
Nzọụkwụ 2: Malite iTunes.
Nzọụkwụ 3: Jide ike bọtịnụ gị iPhone na swipe nkwenye. Mgbe ahụ, ike anya gị iPhone.
Nzọụkwụ 4: Malite mgbake mode nhọrọ. A nwere ike mere site na ịpị na-ejide n'ụlọ button mgbe gị iPhone na jikọọ na nsọtụ ọzọ nke eriri USB. Ozugbo ejikọrọ, gị iPhone ga-atụgharị on. Ọ dị oké mkpa ịnọgide na-ejide n'ụlọ button ruo mgbe iTunes window Pop elu. iTunes ga-agwa gị na iPhone mgbake mode e achọpụtara.
Nzọụkwụ 5: weghachi iPhone na iTunes site na ịpị Ok, mgbe ozugbo-egosi. Mgbe ahụ, họrọ Summary Tab na-ahọrọ Weghachi ndabere ... nhọrọ. Ọ dị mkpa iburu n'obi na usoro a ga-akwụsị niile data na ekwentị. Gbaa mbọ hụ na a ndabere ẹka ke iTunes tupu a dị ka nke a nzọụkwụ ga weghachi ekwentị na ụlọ ọrụ ntọala.
Nzọụkwụ 6: Ozugbo weghachiri eweghachi, jiri ndabere data si aga ndabere. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị weghachi ndabere si iCloud, ọ dị oké mkpa ka ị nwere gị apple ID na paswọọdụ tinyere gị iCloud ndabere faịlụ.
Dozie njehie ke iTunes
Mgbe ụfọdụ, e nwere ike inwe njehie ozi mgbe na-agbalị iji weghachi ma ọ bụ melite gị iPhone. Ndị a njehie ozi ma ọ bụ anya ozi-erukwa n'ihi na nke okenye mbipute nke software ma ọ bụ nkesa njikọ njehie. Ọtụtụ n'ime ndị weghachi njehie na update mbipụta nwere ike ofu site na isoro ise nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1: iTunes update. Akpa imelite iTunes ka ọhụrụ version maka gị PC / Mac.
Nzọụkwụ 2: sistemụ mmelite: Melite gị iPhone sistemụ site ịlele maka mmelite. Mmelite maka Mac dị na website na ike ga-enweta site na ebe a. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na-eji Windows ma ọ bụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ usoro, ego ndị dị mkpa OS na enye maka mmelite.
Nzọụkwụ 3: Security Software mbipụta. Ego maka kpọmkwem nche software na ebute ihe nke ma ma melite ma ọ bụ gbanyụọ sof tware na ebute nke. Mgbe ụfọdụ ụfọdụ nche software gbochie mmelite nke iPhones. N'ihi ya ọ dị mkpa ka gbanyụọ ya ma ọ bụ mgbe ụfọdụ iwepụ iji hụ na Iweghachi ma ọ bụ melite arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 4: System Malitegharịa ekwentị. Ozugbo nzọụkwụ n'elu na-mere, unplug enweghị isi USB cables na-pluged n'ime PC / Mac na Malitegharịa ekwentị gị usoro. Ọzọkwa Malitegharịa ekwentị gị iPhone.
Nzọụkwụ 5:-agbalị ime Iweghachi ma ọ bụ melite usoro ugbu a. Nke a kwesịrị Olileanya. Ọ bụrụ na ọ ka na-adịghị arụ ọrụ, na-eji njehie koodu ma na-agbalị ịlele ya na Apple website. Nke a na saịtị na-enye ndepụta niile njehie Koodu na kpọmkwem njehie metụtara na koodu.
Ibufee ọdịnaya site na Android ka iPhone
Easy Ụzọ ndabere iPhone ka Computer
Ihe akporo ekwentị si dị nnọọ iche iPhone
Best 17 ngwa ọdịnala n'ihi iPhone
Nyefee égwu N'etiti iPhone na iTunes
Jailbreak iPhone 4S na-agba ọsọ iOS 7
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPhone
Nyefee Music site na kọmputa na-iPhone
Zọpụta Ozi si iPhone ka Computer
Hichapụ faịlụ site iPhone
2 Mfe Ụzọ ndabere iPhone Data tupu upgrading ka iOS 7
[Esemokwu ofu] iPhone Nọgidesiri na Apple Logo ihuenyo
> Resource> iPhone> Atụmatụ na usoro na Iweghachi iPhone